Iimpawu, ukondla nokuzala kwakhona komnenga oblue | Ngeentlanzi
Indalo ingasothusa ngendlela engakholelekiyo. Ubungakanani bezilwanyana bunokungalingani. Oku kwenzeka kwisilwanyana esincancisayo esiphambili kweli nqaku Umnenga oluhlaza. Sisilwanyana esikwaziyo ukulinganisa ukuya kuthi ga kwi-108 yeenyawo ubude kunye nobunzima obujikeleze iitoni ezili-190. Ihlala ezilwandle nakwiilwandlekazi. Zithathwa njengezona zilwanyana zinkulu emhlabeni kwaye indlela yazo yokuphila ibalasele kakhulu.
Dlulela kuthi kwinqaku apho unokufumana khona iimpawu, indlela yobomi, ukondla nokuzala kwakhona komnenga oblue.
2 Ukondla kunye nokusasazwa komnenga
3 Ukuzaliswa kunye nolondolozo
4 Isenzo somntu
Sesona silwanyana sikhulu. Ikwangoyena mkhulu wemikhomo. Olunye lweempawu zazo eziphambili kukuba, nangona zikhulu kakhulu ngobude, zikwanobunzima obulinganayo. Le yindlela ivumela umzimba wakho ukuba usasazwe ngokulinganayo. Ukuba ubunzima bakhe babusasazwa ngokungafanelekanga, wayenokuba nobunzima ngokudada. Ndiyabulela kolu lonikezelo lobunzima kunye nobuncwane obubonisayo, inokuhamba ngokukhawuleza emanzini.
I-blue whale inamaphiko amade kakhulu ukuze ikwazi ukuhambisa umzimba wayo wonke. Ke ngoko, ziyakwazi ukuhamba ngesantya esiphezulu emanzini ngaphandle kobungakanani bazo obukhulu. Ngokwesiqhelo, bafikelela kwinqanaba leemayile ezili-12 ngeyure. Kodwa ukuba imeko ifuna oko, uya kuba nakho ukudada ukuya kuthi ga kwiimayile ezingama-30 ngeyure.
Ekuziphatheni kwabo sifumana amaqela aneempawu ezahlukeneyo. Ngokubanzi, bathambekele ekubeni zizilwanyana ezizimeleyo, kuba bafuna indawo enkulu yokuhlala ukuze baphile kwaye baphile. Nangona kunjalo, kumaxesha amaninzi, sidibana neminenga edada kwaye ihlale kunye. Akuqhelekanga ukufumana iminenga engaphezu kwemibini. Amaxesha amaninzi sibona iminenga emibini idibene iya kuba ngumama nosana lwakhe.
Sinokubona iminenga emininzi kunye xa indawo inokutya okumnandi. Oku kubenza bahlale kunye ixesha elide kwaye banokuhlala eluntwini. Njengoko sele sazi, i-blue whale sisilwanyana esanyisayo, ngoko ke asinazo iigill, kodwa ke sinemiphunga. Iyakwazi ukugcina umoya kwaye ihlale emanzini phantsi kwemizuzu engama-20. Xa eli xesha lidlulile, kuya kufuneka ubonakale ukuze ubambe umphefumlo wakho. Oku kuyenza ibe sisilwanyana esifunwa kakhulu ukuze babone. Azihlali zihlala ezinzulwini, kuba kufuneka ziphume ukuze ziphefumle. Kukulungele ukubonwa kwezikhephe.
Ukondla kunye nokusasazwa komnenga
Yazisa ngesixa esikhulu se krill kunye nezinye iindlela zobomi ezincinci kukutya kwayo. Okona kutya bakuthandayo siskwidi kwaye batya kakhulu xa bebaninzi. Banokutya ukuya kuthi ga kwi-8.000 yeepawundi zokutya yonke imihla xa benakho.
Ukondla umntwana whale ngumsebenzi ogqibeleleyo kumama, kuba uyakwazi ukutya phakathi kweelitha ezili-100 nezili-150 zobisi ngosuku.
Njengokuba zininzi ii-subspecies ze-blue whale, kuyinto eqhelekileyo ukudideka nezinye iintlobo zeminenga ukuba awuyongcali kuyo. Ngokwesiqhelo, uluhlu olusasazeka ngalo Ibandakanya ulwandlekazi lweAtlantiki nolwePacific. Abanye abantu baye bachonga esi silwanyana kuLwandlekazi lwaseIndiya, nangona senditshilo ukuba banokuba ziimpazamo.
Ngenxa yesenzo somntu, uluhlu lwesi silwanyana sinciphise kakhulu. Zombini iindawo zokuhlala zendalo kunye neemeko zolwandle ngokubanzi zinciphile. Iilwandle zingcoliswe kakhulu kwaye iminenga ithwaxwa ziziphumo zayo. Ngaphambili babesasazwa phantse kuwo onke amalwandle ehlabathi.
Ukuzaliswa kunye nolondolozo
Ezi zilwanyana zinexesha elide lokuzalisa. Ngokungafaniyo nezinye iintlanzi ezineminyaka emifutshane, i-blue whale iqala ixesha lokuzala ukusuka ekwindla ngasekupheleni kwaye lihlala kude kube sebusika. Akukho lwazi lungako malunga nenkqubo yokufumana iqabane, ke asinakho ukuchaza kakuhle ukuba yintoni inkqubo yokuthandana kwabantu abathandanayo okanye ukuba bathumela imiqondiso yokufowunelana. Le yeyona ndlela banokuyisebenzisa.
Amabhinqa ayavuthwa xa efikelela kwiminyaka elishumi. Amadoda athi emva kwexesha kwaye afune iminyaka eli-10 ukukhula. Imazi iya kuba nakho ukuba ncinane rhoqo kwiminyaka emibini okanye emithathu. Nangona kusithiwa ziintsana okanye amathole, umnenga osanda kuzalwa unokuba ziimitha ezingama-12 ubude kwaye ube nobunzima obufikelela kwiitoni ezi-23. Ayisiyonto leyo, ngokuchanekileyo, sinokuthi yinto encinci.
Ngenxa yeempembelelo zabantu kunye nokuhamba kancinci kokujikeleza, imeko yolondolozo lweminenga iyingozi. Phakathi kwiminyaka yoo-60, inani leeminenga laqala ukwehla ngendlela emangalisayo. Namhlanje, bamalunga ne-12.000 kuphela abantu. Ezinye iingcali zicinga ukuba zingaphaya kwe-12.000 ezifihliweyo kuzo zonke iilwandlekazi. Oku kunokuncitshiswa kuba bekukho ukubonwa okuthile kufutshane nommandla weArctic.
Iminenga yayizilwanyana eziqhelekileyo kumaxesha amandulo. Ingxaki abanayo kukuba, ukuba nobomi obude kangako (ixesha labo lokuphila lisondele kwiminyaka engama-80), umjikelo wabo mde kakhulu. Ukuze bakwazi ukuzala kwakhona kufuneka phakathi kweminyaka eli-10 ukuya kweli-12 yokuvuthwa kwaye umntu obhinqileyo unokufumana kuphela iminyaka emibini okanye emithathu. Oku kubambezela ukudlala kwabo kwakhona. Nangona kunjalo, iimpembelelo zokusingqongileyo kwiilwandle nakwiilwandle ziyanda mihla le. Ezi zilwanyana ziya zisengozini kwaye akukho nto inokwenziwa ngayo.
Okwangoku, zininzi iinzame zokulondolozwa kwezi zilwanyana. Kuba abantu banomdla okhethekileyo kubo, oku kubabize ixabiso eliphezulu. Inani leminenga elizingelwayo lalilikhulu kangangokuba ngo-1966 kwafuneka kuthinjwe ukubanjwa kwabo. Nangona ukuzingela kwabo kungavumelekanga ngeli xesha, ngenani eliphantsi leesampulu kunzima kubo ukuba babuyise.
Ngaphandle kokuba zizilwanyana ezingaqhelekanga nezaziwayo, ziyadlakazeliswa zizenzo zabantu. Obunye ubungqina bokuba sitshabalalisa yonke into esijikelezileyo. Ndiyathemba ukuba umnenga uya kuphila kwaye uphucule abantu ngokuhamba kwexesha. Kufuneka sikhathazeke ngokubaluleka kwezi zilwanyana.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Umnenga uBlue